भोलि जेठ ८ गते बुधवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !
भोलि मिति बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको ८ गते बुधवार तद अनुसार सन् २०१९ मे २२ तारिक आमाको मुख हेर्ने तपाईको दिन कस्तो रहला त ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल
निर्धारित समयमा नै आँटेका कामहरु पुरा भएर जानेछ। धार्मिक एवम मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। धार्मिक यात्राको योग रहेको छ। नोकरी व्यवसाय एवम घरायसी वातावारणमा सामान्य खटपट हुन सक्ला सावधान रहनुहोला।
अपेक्षा गरे अनुरुप कार्यमा सफलता नमिल्नाले मानसिक चिन्ताले सताउने छ। खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। कार्यभार बढेर जानेछ। योग साधना एवम आध्यामिकताले मानसिक शान्ति पैदा गराउने छ।
साथीभाई एवम इष्टमित्रका साथमा सुखमय दिन व्यतित हुनेछ। नया बस्त्रभुषण खरिद गर्ने उचित समय रहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ हुने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखको अनुभूति हुनेछ।
मानसिक उत्साहमा वृद्धि भएर जानेछ। पारिवारिक सुखको अनुभूति हुनेछ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ भएर जानेछ। सहकर्मीको प्रसस्त साथ र सहयोग प्राप्त भएर जानेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा सकेसम्म सहभागी नहुदा नै राम्रो हुनेछ।
शारीरिक एवम मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। सिर्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। प्रियजनसंग भेट हुने सम्भावना रहेको छ। सन्तान सुख मिल्नेछ। बिद्यार्थीवर्गका लागि पढाई लेखाइको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ।
मानसिक चिन्ताले सताउनेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। माताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ। अनावश्यक मनमुटावमा फस्ने सम्भावना रहेको छ। पानीदेखि सावधान रहनुपर्ने छ। स्वाभिमान भंग हुन सक्ला ध्यान दिनुहोला।
नया कार्यको थालनी गर्नका लागि समय अनुकुल रहेको छ। अचानक धनलाभ भएर जानेछ। भाग्योदयको योग रहेको छ। धार्मिक आयोजनामा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। विदेशस्थित शुभ समाचार सुन्न पाइने छ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ।
पारिवारिक सुख शान्तिको अनुभूति हुनेछ। प्रियजनको भेटघाटले मनमा शान्ति छाउने छ। धार्मिक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। आकस्मिक धनलाभ भएर जानेछ। बिद्यार्थीवर्गका लागि समय अनुकुल रहेको छ।
पढाई लेखाइमा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। धार्मिक एवम मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। साथीभाईका साथमा आनन्ददायी समय व्यतित भएर जानेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ।
मानसिक उत्साहमा कमि आउनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। धार्मिक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। धार्मिक एवम आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। शत्रुले नकारात्मक समयको फाइदा उठाउन सकलन सावधान रहनु होला। आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउने छ। सन्तान सुख मिल्नेछैन।
नया कार्यको थालनी गर्नका लागि समय अत्यन्तै लाभदायक रहेको छ। पारिवारिक एवम दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ। नोकरी व्यवसायका लागि समय लाभदायक रहेको छ। आय आर्जनमा वृद्धि भएर जानेछ।
अपेक्षा गरेअनुरुप हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र लाभदायक रहेको छ। सार्वजनिक मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। घरयासी वातावरणमा सुख शान्ति छाउने छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०७, २०७६१३:५६
भोली जेठ ९ गते बिहिवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको राशिफल !